Iindaba -Iprojekthi yokuChithwa kweDisneyland Park,
Iprojekti yokunikezela ngemisebenzi -Ingomso leDisneyland Park, eShanghai
Ngomso Iprojekthi yeShanghai DisneylandUkufezekisa ngexesha lokwakha elicwangcisiweyo, udonga lwangaphakathi lokwahlulahlula kwakwenzelwe ukwakhiwa ngaxeshanye ngexesha lofakelo lwe-MEP. Yiyo loo nto samkela eyethuUkutsala iringlock. Ukunyuka kwezintokufuneka ibonelele ngeqonga lokusebenza elinokuphakama kwe-9m, kunye nendledlana yeentaka kunye neqonga lokusebenza elijikelezileyo. Indawo yokusebenza eyi-30cm iyafuneka phakathi kodonga lokwahlulahlula kunye nodonga lwangaphakathi. Njengokuba izinyuko, ibhulorho kunye neendlela zokuzonwabisa sele zigqityiwe, kufuneka siziphephe ezi zibonelelo. Ubungakanani beprojekthi ngama-9500m³, kwaye ixesha lokwakha kulindeleke ukuba libe ziintsuku ezili-15.
Sisebenzise uhlobo lwethu B yokutshixa ring yale projekthi, nokuba yeyethu iiplanga zentsimbi, izinyuko zentsimbi kunye neebhodi zentsimbi.
Isithuba phakathi komgangatho yi-2m × 2m, kwaye isithuba esime nkqo yi-1.5m. Iiplanga ezizodwa zentsimbi zibekwe kwindawo yokusebenza njengeqonga lokusebenza.
Ezona ngxaki ziphambili zisonjululwe sithi zezi zilandelayo:
Ukubonelela ngeqonga lokusebenza kweemitha ezili-9 zomsebenzi wokwenziwa kophahla kunye nokufakwa kwe-MEP. Iiplanga zentsimbi zibekwe ngaphezulu kwendawo apho ulungelelwaniso lwebar ethe tye luqhelekile.
Umqadi wentsimbi ujikeleze kufuneka uchithelwe, ke kufuneka kubekho indawo yokusebenza ejikeleze indawo. Yiyo loo nto indawo yokusebenza ijikelezwe ngamaplanga ensimbi.
Ukubonelela ngendawo efanelekileyo phakathi kwesahlulelo sangaphakathi kunye iqonga lokwakha. Ukwakhiwa kodonga lokwahlulahlulahlulwe kwaba ziinkqubo ezimbini zokusebenza, ukufakela nokupeyinta. Ukufakwa kufuna indawo enkulu phakathi kweqonga lokwakha kunye nokwahlulahlula ngaphakathi, ngelixa ukupeyinta kufuna ukufumana iqonga lokwakha kufutshane nokwahlulahlula ngaphakathi kangangoko. Kule ndawo, kukho umsantsa omkhulu phakathi kwe-scaffolding yoqobo kunye nodonga. Ke emva kokuba sigqibile ukulayisha iiplanga zentsimbi, sisebenzisa umbhobho wentsimbi kunye nokudibanisa ukongeza (jonga umzobo wesakhelo sodonga).
4.Providing umphezulu yokusebenza umsebenzi wokutshiza wekholam yentsimbi kule ndawo. Uyilo alubandakanyi umphezulu wokusebenza wekholamu yentsimbi ngokukodwa. Ke, kufuneka sisebenzise i-scaffold yethu njengesona sakhiwo siphambili sokuthwala. Emva kwexesha, samisela indawo yokusebenza ngombhobho wentsimbi, i-coupler kunye neplanga leplanga kwi-scaffold.
5. Kubonelelwe ngezinyuko ezibini ezinokufikelela kumgangatho osezantsi.
Yenza into engenanto
Nini ukuwelayakhiwe, icandelo ngalinye kufuneka liphephe umkhondo wokuzonwabisa ongezantsi, kwaye lishiye indawo yokusebenza yokwakha udonga lwangaphakathi lokwahlulahlula. Udonga lwangaphakathi lokwahlulahlula lwakhiwe ukuya kwindawo emalunga ne-7.5m, kwaye indawo ephezulu inendawo yokusebenzisa ilungu elingenanto. Umsebenzi wokukhafula wenziwa kusetyenziswa izixhobo ze-4m okanye ze-6m, imibhobho ye-16 yentsimbi kunye nentsimbi, njl.
Xa iziqwenga zomkhombe zisetyenziswa, ii-wedges kuzo zombini iziphelo kufuneka ziqinisiwe, kwaye iileja kufuneka zenziwe zaya kwicala lamaqhekeza omthi ukukhusela iziqwenga zomkhondo ukuba zingazinzi (njengoko kubonisiwe kumzobo 7).